Shiinaha warshadleyda waxsoosaarka iyo alaab-qeybiyeyaasha dahabka ah iyo kuwa iswada leh | Aotiyaan
XAASHI SAWIRKA DAHABKA AH
Magaca sheyga:Waraaq sawir oo dahab ah
Codso:Sawirka arooska, sawirka shahaadada, sawirka farshaxanka
Baaxadda dalabka: taxanahan alaabada ah ee ku habboon soo saarista sawirka arooska dijitaalka ah, sawirka xayeysiinta, kaarka kaarka heerka sare ah, dhalada rinjiyeynta qurxinta, farshaxanka iyo farshaxanka.
Sawirada la daabacay waxay leeyihiin midabyo dhalaalaya oo dhaqso ayay khadku u nuugaan.
Waxyaabaha soo-saarka: dhaldhalaalka hufan ee dhalaalaya, xawaaraha cusub ee degdegga ah, sawirrada daabacaadda oo leh qaab bir gaar ah iyo sheeko saddex-cabbir ah, xulashada daabacaadda shakhsi ahaaneed, oo si ballaaran loogu adeegsado bandhigyada gawaarida, shaqada sawirka, farshaxanka farshaxanka, MEDALS biraha ah, calaamadaha, iwm. Filimka PET, daloolinta corona waa la iftiimiyay, taas oo ah bedelka ugu fiican ee qolka asalka ah. Dahaarka dharka, isku dhejinta adag, nuugista khadka wanaagsan, iswaafajinta khadadka wanaagsan, midabka muuqaalka muuqaalka, Dhuxul, gogol, siman, soocelin midab wanaagsan, sawirro matte ah, sawir macquul ah, sawir dabeecad soo jiidasho leh, midabka asalka ah ayaa culus, indho qabad badan. Ku habboon muujinta, xayeysiinta, qalabka wax lagu duubo, sawirrada sawirrada, farshaxanka farshaxanka; Waa sheyga ugu fiican ee lagu sameeyo sawirro, qaadashada tiknoolajiyada horukaca sare ee ajaanibta ah, nuugista khadadka wanaagsan, bilaa xilliga qaboobaha, dusha sare waa hagaag iyo xitaa, jilicsan oo sharaf leh ; Naqshadeynta waa mid cad oo leh maqaar aad u fiican. Badeecadani ma soo qaadaneyso mashiinka, mashiin kasta oo khad biyo-ku-saleysan waa la soo saari karaa, daabacan karaa, baakadeyn karaa, isku-dhafan ayaa leh la qabsi fiican.
Taxadarka taxadarka sheyga iyo isticmaalkiisa: Feejignow si aad uga hortagto iftiinka qoraxda ee tooska ah inuu u horseedo lakabka gabow hal dhinac ah.Ka ilaali heerkulka 10-23 digrii meel ka fog kuleylka. Isku day inaad qolka ka dhigto mid qabow, qalalan oo aan boodh lahayn. boodhka ganaaxa wuxuu saameyn ku yeelan karaa daabacaadda filimka.Waxaa loo qaabeeyey si looga fogaado ballast xad-dhaaf ah cuf isjiidasho.Ha qaldan qaybta daabacaadda filimka markaad isticmaaleyso, hana ku taabanin dhinaca daabacaadda filimka gacmo qoyan, iyadoo la ogaanayo in dahaadhka daabacaadu aanu si fiican u helin khadku.
Hore: QORAALKA SAWIRKA QORAALKA
Warqad Dahabi ah oo Sliver ah
Warqad Sawir ah
Waraaq Madoow, Daabacaadda Warqad Sawirro ah, Warqad Sawir ah oo dhalaalaya oo dhalaalaya, Warqad Wareejin Hufan, Warqad T-Shirt ah, Warqad Bir ah oo loogu talagalay Shaati,